Maalinta: Abriil 18, 2019
Tareenka labaad wuxuu imanayaa Bariga Express
Akhbaar xun wariyaasha East Express! Ma jiraan wax socdaal ah oo lagu tago tikidhada East Express, halkaasoo tiro badan oo muwaadiniin ah ay ugu tartamaan tigidhada? Gaadiidka TCDD, kordhinta qiimaha tigidhada baaxadda leh “kororka dakhliga ku soo gala qaybta dadweynaha” [More ...]
Tareennada-ganacsiga Midowga Adapazari Branch Building on natiijada soo socda madaxweyne wada ururka quraacda saxaafadda, Cemal ÒNebiga, Turkey baabuur Industry Corporation (TÜVASAŞ) 's ee la soo dhaafay, hadda iyo mustaqbalka saabsan mowduuca siidaynta la dadweynaha [More ...]
Booqashada safaaradda Spain ee TCDD
Safaaradda Isbaanishka Undersecretary of Economy iyo Trade Fernando Hernández Domínguez ayaa booqday maareeyaha guud ee TCDD Ali İhsan Uygun xafiiskiisa 17 Abriil 2019. Intii lagu jiray booqashada Maareeyaha Guud Uygun, TCDD iyo muddo dheer [More ...]
Yaa doonaya in uu noqdo Milyaneer la weydiisto Goobta Hore ee Degaanka ee gudaha
Yaa doonaya inuu noqdo Milyaneer? Su'aasha la weydiiyay tartanka ayaa xusuusiyay tikidhada tamarta, wax soosaarka gudaha iyo kan qaranka ee ugu horeeyay ee tareenada Turkiga ku faraxsan soo bandhigay. Sheekada tikidhada tamarta ee ku jirta qoraalada dahabka ee taariikhda tareenka ayaa ah sida soo socota; [More ...]
Turkey tareenka iyo Engine Industry Inc. ogeysiis cusub ayaa lagu sameeyay barta rasmiga ah waxaana dukumintiga laga codsaday musharrixiinta ku xaddidan qoritaanka shaqaalaha joogtada ah. SHAQAALAHA SHAQAALAHA EE ISKUR LIST [More ...]
Shaqadu waxay sii socotaa Muugla Caawin la'aan
Kooxaha bilayska ee Muğla, lugeeyaha, baaskiilka, wadooyinka naafada ah iyo basaska ayaa looga tagay gawaarida 'Put a caqabad' xaashiyaha wargaliyay. Kooxo boliis ah oo ka tirsan Dowlada hoose ee Magaalada Muestla gaar ahaan kuwa lugeynaya basaska. [More ...]
Tusay-i Milliye Memorial Crossroads Work ayaa la bilaabay mar kale
Duqa Magaalada Magaalada Mersin ee Vahap Seçer ayaa dib u bilaabay howlihiisii ​​isku xirka iskuxirka Kuvay-i Milliye Memorial, kaas oo inbadan taagnaa khilaaf soo kala dhex galay qandaraaslaha. Dawlada Hoose ee Mersin [More ...]
Erciyes si ay u sameeyaan maalgashi cusub
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu sii wadaa kulamada uu la leeyahay cutubyada dowladda hoose ilaa iyo saqda dhexe. Madaxweyne Büyükkılıç, markan wuxuu shir ku qabtay Erciyes. Madaxweyne Büyükkılıç, Erciyes gaar ahaan xagaaga [More ...]
Golaha magaalada, oo uu gudoomiye u yahay Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, ayaa ansaxiyay warbixin sanadeedka xisaab xirka sanadka 2018. Kalfadhigii labaad ee bishii Abriil, Golaha Dawladda Hoose ee Magaalooyinka ayaa ka wada hadlay qodobbada ajendaha. Qeybta ugu dambeysa fadhiga, [More ...]
Maalgashiga Gaadiidka ee Boosaaso Kuma Yeelan Karo
Shaqooyinka ay qabato Dowlada Hoose ee Magaalada Bursa iyada oo hadafku yahay in magaalo si fudud loo heli karo ayaa kusii socota degmada 17. Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş, waa magaalo jabisa xusuusta [More ...]
18 April 1923 Samsun-Khamiis Arbaco ah ayaa bilaabmay